I-Lago Maggiore Studio 2 ene-wifi enejubane eliphakeme - I-Airbnb
I-Lago Maggiore Studio 2 ene-wifi enejubane eliphakeme
VILLAGGI, Piemonte, i-Italy
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Sara
Le ndawo efudumele nethokomele ingamamitha angu-50 kuphela ukusuka echibini namakhilomitha angu-6 ukusuka e-Arona. Ifulethi lisanda kuvuselelwa nakho konke ukunethezeka futhi litholakala ekupheleni komgwaqo wangasese. Ibhishi ligcinelwe izivakashi zendawo yokuhlala, ngale ndlela ukuzola kuqinisekisiwe futhi phakathi nenkathi yonyaka ephakeme. Ungahamba ngo-500 mt ukuya esitolo esikhulu esiseduze futhi isikhungo esikhulu sokuthenga esinezitolo zokudlela zaso sikude ngamakhilomitha angu-147
Lokhu kuyisinqumo esihle kakhulu somuntu ofuna ukuphumula kodwa hhayi kude namasevisi.
Le-studio sinegumbi lokuphumula elihlelwe kahle kakhulu, elinosofa, i-tv nendawo yokudlela.
Unganquma ukudla ngaphakathi etafuleni lokhuni nezihlalo zokuklama, ngaphandle kwalokho i-patio yangaphandle ingasetshenziswa njengendawo yokudlela enetafula, izihlalo nendawo yokosa.
Ikamelo lokulala linethezekile futhi linekhabethe elivulekile futhi ubhavu ulungisiwe ngokuphelele. Ukupaka kwangasese kungaphambi kwefulethi futhi ibhishi yotshani lingu-50 mt kuphela kude nesitudiyo, ngakho-ke, futhi phakathi nenkathi yonyaka ephezulu ngeke ube nezinkinga ngokupaka.
Eceleni kwebhishi egcinelwe izivakashi zale ndawo yokuhlala kunenkundla encane yokudlala (phambi kwechibi), nayo evumela ukunakekela izingane ngenkathi uhlezi ogwini!
ubusuku obungu-7 e- VILLAGGI
Ifulethi lingaphakathi kwedolobhana, elinomgwaqo ozimele, ngakho futhi liyindawo ephephile ngoba akekho umuntu wangaphandle ongangena.
Ngihlala ngithintana nesivakashi ngesikhathi sokuhlala kwabo.